Amathiphu wokugcina umlando - uLucidPix
I-Top 10 Best Landscape Photography Ethathwe Abahambi Emhlabeni Wonke Kulesi senzakalo, sifuna ukukubonisa izibonelo ezithile ezinhle kakhulu zokuthwebula izithombe ezithathwe abahambi abanokuzithokozisa ngamaholide abo hhayi ngaso sonke isikhathi nabahamba phambili ...
Amathiphu awusizo wokuhlela izithombe ze-DIY Wedding Photography kungacindezela. Kusukela ekukhetheni indawo, ukunquma ngemenyu yokwamukela, kungathatha inani. Uma ungeza ezindlekweni zakho konke, kuba ngokushesha ...
Amanye Amathiphu Wokuba I-Pro Lapho Uphoqelelwa Ukubheka Izithombe
Amanye Amathiphu Wokuba I-Pro At Forced Perspective Photography Umbono ophoqelelwe ukuthwebula izithombe uthakazelisa kakhulu kumbukeli, njengoba izithombe zinikeza umbono wokuthi izifundo zisondele kakhulu noma ziqhelile kunalokho okuyikho ngempela. Ku ...
Zama Isandla Sakho ku-Pet Photography
Zama Isandla Sakho ku-Pet Photography Wonke umuntu uthanda izifuyo zakhe. Ukuthatha izithombe zazo kubamba impela izikhathi ozofuna ukuzazisa ingunaphakade. Okungcono nakakhulu, ukuguqula lezo zithombe zezilwane zibe izithombe ze-3D ezinikela ...
Zimbalwa Izinto Ongazigcina Engqondweni Lapho Wenza Isikhathi Eside Ukuthwebula Izithombe Sivame ukubona izithombe ezinhle zesibhakabhaka nemvelo, ezibukeka sengathi zithathwe ngumthwebuli wezithombe okhokhelwayo onemishini ebizayo. Lolu hlobo lokuthatha izithombe, ...
Amathiphu Wokuthwebula Ukuthwebula Ungakwenza Kanjani Ukuzuza Kwakho Kubukeke Ukuthwebula Ukuthwebula Okuhle kuyindlela enhle yokubonisa umsebenzi owufakile emzimbeni wakho. Noma ngabe ungumakhi womzimba ufuna ukuthatha incazelo yakho ephelele yemisipha, noma i ...
Izinto ezi-4 okufanele uzikhumbule lapho wenza izithombe zemfashini Ufuna ukungena ezithombeni zemfashini? Isikhathi esiphelele. Imithombo yezokuxhumana isibe yikhaya hhayi nje lemikhiqizo emikhulu efana ne-H & M ne-Forever 21, kepha mincane futhi, futhi ...
Amathiphu ama-5 Wokwakha Iphothifoliyo Yezithombe Eziyindlela Inketho enhle kakhulu yokubonisa amakhono akho amangalisayo wesithombe futhi wethule umsebenzi wakho wokuba ngumthwebuli wezithombe ukudala iphothifoliyo yezithombe e-inthanethi. Ngenkathi uzikhangisa kuma media social ...
Imibono Yezithombe Zasehlobo Zase-3D Akunakuphikwa ukuthi ihlobo yisizini efanelekayo yezithombe. Ngesimo sezulu esihle kanye namahora amade okukhanya kwelanga, kunamathuba amaningi kakhulu wokuhlola nokuhlola imibono yezithombe. Uma ...
Amathiphu Wezithombe ze-3D - Ungazidubula Kanjani Izithombe Zika-3D ezihamba phambili
Amathiphu wezithombe ze-3D Ungashutha Kanjani Izithombe ezihamba phambili ze-3D Ngaphambi kokuthi uhambe uzenzele ubuciko obukhethekile, nazi izeluleko ezimbalwa zezithombe ze-3D ezizokusiza wenze izithombe ezinhle kakhulu ze-3D. Yeqela kusigaba: Sondela • Ungakhohlisi i-AI ...